အဘယ်ကြောင့်ရထားဖြင့်ခရီးသွား Environmental Friendly Is | တစ်ဦးကရထား Save
နေအိမ် > ရထားခရီးသွားခြင်း > အဘယ်ကြောင့်ရထားဖြင့်ခရီးသွား Environmental Friendly Is
ရထားလမ်းပို့ဆောင်ရေး ခရီးသွားလာအရှိဆုံးပတ်ဝန်းကျင်-ဖော်ရွေနည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်. မီးရထားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါ်ကီလိုမီတာနှုန်းဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှု၏ဖန်လုံအိမ်သက်ရောက်မှုပင်ဖြစ်သည် 80% မော်တော်ကားထက်လျော့နည်း. အချို့နိုင်ငံများရှိ, ထက်ငယ်သော 3% ဓာတ်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုရထားကလာအားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး. ရထားထက်ပိုပြီးပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းများလမ်းလျှောက်နေကြသည်နှင့် စက်ဘီးစီးခြင်း. အဲဒီမှာ ရထားသွားလာရွေးချယ်ရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပြီးငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူဤအများကိုမျှဝေချင်ပါတယ်အဘယ်ကြောင့်အများအပြားအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်!
ပုံမှန်ရထားလိုင်းကိုသယ်ဆောင်နိုင်ပါတယ် 50,000 တစ်နာရီကလူ. တစ်ဦးအဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့လမ်းသွားနှင့်အတူဤနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ပါ, သာရွှေ့နိုင်သည့် 2,500 တစ်နာရီကလူ.
Nigel C Williamson မှတင်ပြသောပို့စ်တစ်ခု (@therealnigelcw)
ရထားလမ်းနှင့်အတူမော်တာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခြားနားလိုက်တဲ့အခါ, ပြင်ပကုန်ကျစရိတ်, ဆူညံသံ, လေထုညစ်ညမ်းမှု, ယာဉ်မတော်တဆမှု, နှင့်အခြေခံအဆောက်အဦများပျက်စီးယိုယွင်း, နှင့်ပိတ်ဆို့မှုကိုဝေးအောက်ပိုင်းပေါ်မှာ ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ယာဉ်သုံးပြီးထက်ရထား.
ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှု – အဘယ်ကြောင့်ရထားသွားလာရွေးချယ်ရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်
ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုသည်လူသားများနှင့်ဆူညံသံများ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်စေသည် တိရိစ္ဆာန်များ. ဒါဟာဆငျးရဲသားတစ်ဦးကိုတိုက်ရိုက်ရလဒ်ပင်ဖြစ်သည် မြို့ပြစီမံကိန်းရေးဆွဲရေး. ရှေးခေတ်ရောမမြို့မှဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုနေ့စွဲနောက်ကျောကနေပြဿနာများ! ယနေ့တွင်, ကားများအနေဖြင့်ဆူညံသံညစ်ညမ်းမှုကြောင့်လူရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြည်နယ်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်. ရောဂါလက္ခဏာများသွေးတိုးရောဂါပါဝင်သည်, High-စိတ်ဖိစီးမှုအဆင့်ဆင့်, tinnitus, အိပ်စက်ခြင်းနှောင့်အယှက်, နှင့်အခြားအန္တရာယ်ရှိသောဆိုးကျိုးများ.
ယခု, လမျးခရီးဆူညံသံ၏သက်ရောက်မှုကန့်သတ်အတိုင်းအတာရှိပါတယ်. အစီအမံဆူညံသံအတားအဆီးတွေတို့ပါဝင်သည်, မော်တော်ယာဉ်အမြန်နှုန်းကန့်သတ်, ပြောင်းလဲနေတဲ့လမျးခရီး texture, အဖြစ်ချောမွေ့မော်တော်ယာဉ်စီးဆင်းမှုကို enable ပြုလုပ်အသွားအလာထိန်းချုပ်မှု. ဒါကအသွားအလာထိန်းချုပ်စနစ်ကားများလျော့နည်းသူတို့ရဲ့ဘရိတ်နှင့်အရှိန်သုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မည်ဆိုလိုသည်.
ရထားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပြီးကြောင်းဝေဖန်ဖြစ်ပါသည်. အိန္ဒိယအနေနဲ့နှစ်စဉ်အခြေခံပေါ်မှာတိုးမြှင့်ကားများရောင်းအားကိုမြင်လျှင်ဖြစ်ပါတယ်. တရုတ်နိုင်ငံ ရှိသည်ဖို့ခန့်မှန်းနေသည် 300 အားဖြင့်လမ်းမပေါ်တွင်သန်းကားများ 2030. လေကြောင်းနှင့်သင်္ဘောခရီးသွားကိုလည်းကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ CO2 ထုတ်လွှတ်မှုမှဖြည့်စွက်ထားပါသည်. ဒါဟာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအပေါငျးတို့သသည် Modes ထဲကပုံ, ရထားသာထုတ်လွှတ်မှုအနိမ့်နှင့်စောင့်ရှောက်နေကြသည် အနာဂတ်အတွက်ရေရှည်တည်တံ့.
လျှပ်စစ်နှင့် Hybrid ကိုကားများသိသာရိုးရာကားများထက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအဘို့ သာ. ကောင်း၏, ဒါပေမယ့်ပြဿနာကယနေ့ဤအကားများကားများ၏အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များထွက်ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်တဲ့အဆင့်မှာကိုရောင်းခံရဖို့သိပ်စျေးကြီးတယ်ဆိုတာပါပဲ.
အကြားကွာခြားချက်ရှိပါသည် ဒီဇယ် ရထားများနှင့် လျှပ်စစ် ရထား. လျှပ်စစ်ရထား ထုတ်လွှတ် 20-35% ဒီဇယ်ရထားထက်ကာဗွန်လျော့နည်း. တစ်ဦးကရထားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်ကမ်းလှမ်းမှုအားဖြင့် powered ဖြစ်ကြောင်းအထူးသဖြင့်လျှပ်စစ်ရထားပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ် Carbon-အခမဲ့ခရီး. ကနေထုတ်လွှတ်မှု ဥရောပ၌ရထား တစ်ဦးကိုထပ်မံအားဖြင့်လျှော့ချပါလိမ့်မယ် 50% အားဖြင့် 2030. ရထားများအတွက်အကောင့်ကတည်းကဒါတွေကကိန်းဂဏန်းများအကြီးအများမှာ 8.5% အားလုံးခရီးသွားလာလှုပ်ရှားမှု.
Dave ဝီမျှဝေသည့်ပို့စ်တစ်ခု (@davewheelerstudio)
ရထားသို့မဟုတ်လေယာဉ် – အဘယ်ကြောင့်ရထားသွားလာရွေးချယ်ရာတွင်ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့သဟဇာတဖြစ်ပါတယ်
ဘယ်အချိန်မှာအဓိကအရေးကြီးသောအရာတစ်ခု လေယာဉ်မှရထားနှိုင်းယှဉ် လေယာဉ် takeoff နှင့်ဆင်းသက်နှစ်မျိုးစလုံးအတွက်လောင်စာအနေနဲ့မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ငွေပမာဏကိုသုံးစွဲဖို့မလိုအပ်ကြောင်း. လည်း, လူတွေလေယာဉ်ဖြင့်ခရီးသွားလာသည့်အခါ, သူတို့ကားဖြင့်လေဆိပ်ရလေ့. ဒါကသူတို့ရဲ့ခရီးများအတွက် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုမှဖြည့်စွက်. ဒါကတစ်ခုယူပြီးစေသည် အချင်းချင်းရထား ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုမျှမ-brainer.
အချို့မကြာသေးမီကဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုရှိခဲ့သည်, အထူးသဖြင့်လူတို့အဘို့ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအတွက်ခရီးသွားလာ ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်များ၏ကာဗွန်သက်ရောက်မှု၏ခရီးသွားအေးဂျင့်များအားဖြင့်အကြောင်းကြားသူ. လည်း, ဘေးဖယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကနေ, အဲဒါကိုရန်အလွန်ခက်ခဲသည် မြို့စင်တာများရောက်ရှိရန် ကားဖြင့်, သော်လည်း, သင်တစ်ဦးရထားပေါ်တွင်လျှင်, သင်မြို့ပြစင်တာများမှတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခွင့်ရှိသည်. ဤ, ပိုပြီးမကြာခဏမထက်, ထို့အပြင်အခြားနည်းလမ်းထက်ရထားသွားလာအများကြီးပိုမြန်ဆိုလိုတယ်.
နိဂုံးချုပ်အားဖြင့်, ရထားသည်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်သဟဇာတဖြစ်သောခရီးသွားလာရေးနှင့်စီးပွားရေးနှင့်အပျော်အပါးနှစ်ခုလုံးအတွက်ခရီးသွားသူများအတွက်အဆင်ပြေစေသည်. လမ်းအပေါ်ကားများအတွက်အဆိုပါတိုးပိတ်ဆို့မှုကိုနှင့်လေထုညစ်ညမ်းမှုစီးပွါးအပေါ်ဖြစ်ကြပြီးရထားပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအဖြေဖြစ်ကြောင်းဆိုလိုတယ်.
သင်တို့သည်နောက်ဘွတ်ကင်အခကြေးငွေနှင့်အတူရထားလက်မှတ်တွေကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်? ကိုသွားပါ www.saveatrain.com ဈေးအပေါဆုံးရထားနှုန်းထားများမှဝင်ရောက်ခွင့်ရဖို့.
သင်သည်သင်၏ site ကိုပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘလော့ဂ်ပို့စ် embed လုပ်ဖို့ချင်ပါနဲ့, ထို့နောက်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fwhy-choosing-to-travel-by-train-is-environmentally-friendly%2F%3Flang%3Dmy - (အဆိုပါ Embed Code ကိုကြည့်ဖို့အောက်ကိုဆင်း)
သင်သည်သင်၏အသုံးပြုသူများမျိုးဖြစ်လိုလျှင်, သင်တို့သည်ငါတို့၏ရှာဖွေရေးစာမျက်နှာများသို့တိုက်ရိုက်သူတို့ကိုပဲ့ပြင်နိုင်ပါတယ်. ဒီလင့်ခ်, သင်တို့သည်ငါတို့၏လူကြိုက်အများဆုံးမီးရထားလမ်းကြောင်းများရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ် – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. သငျသညျအင်္ဂလိပ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာများတွင်ဘို့ငါတို့လင့်များရှိအတွင်းပိုင်း, ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့လည်းရှိ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml သငျတို့သက de ဒါမှမဟုတ်နှင့်ပိုပြီးဘာသာစကားများဖို့ fr ပြောင်းလဲနိုင်သည်.
#လျှပ်စစ် ပတ်ဝန်းကျင် ရထားခရီးသွား ခရီးသွား